Isi nke Asatọ - 1aviagem.com
Edebere 23 August 2019 site Römulo Lucena
Dika ekwere m nkwa na ọkwa nke ikpeazụ, aga m ekwu maka mpaghara nke asatọ.
E Kedụ ebe kwanyere nke asatọ?
Ọ karịrị isi anyị. Na Oghere, na Earth Orbit!
Na nchọta maka onyonyo satịlaịtị ka ha mata ogo oku a na Brazil dum. Nke ahụ bụ, gụnyere isi bio bio Brazil nke 6 dịka: Amazon, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Atlantic Forest na Pampas.
Achọtara m saịtị dị mma nke na-egosi na oge Satellites dị, nha ha na ihe ndị ọzọ. Na nkenke ebe ka ohere sara mbara anyị. Nwee obi ụtọ na anya a.
(Foto e si na Akwa n'ime oghere)
Site na saịtị ị nwere ike soro orbit na ọbụna iberibe satịlaịtị ndị na-agbasasị ma gbaa gburugburu ụwa ruo mgbe ha ga-alaghachi n'ime ụwa.
Ndi na-acha uhie uhie bu ihe Satellites, ibe ahu nke okwute. Ihe ndị ọzọ bụ ntụ.
Cheta okwu a: I gaghi egwuri egwu n’èzí, i ghari n’ime Joana Bicalho n’ime post aga).
Na mgbakwunye na Satellites na iberibe ha site na saịtị ahụ ọ ga-ekwe omume soro meteorites yana usoro ha. Iji maa atụ, na foto nke ọzọ ịchọrọ ịhụ iberibe gbagoro site na satịlaịtị Thorad Delta 1 DEB (nke emeputara na imebi 1970).
Oleekwa ebe Satellites ndị Brazil, CBERS na SCD? Iji nyere anyị aka ịghọta ihe na-eme na Amazon? Ebe ọ bụ na mba anyị na-agba ọkụ?
Ọ dị mma, Satellites anyị, ịbụ nke kachasị ugbu a nke 1998, bụ ihe egwu abụọ a na foto ahụ. Kedu ndị ugbu a na-adịghịdị banyere Brazil.
Mgbe ha gbara gburugburu, onye isi ala anyị kwuru na data ha nyere adịghị mma. Na-ajụkwa enyemaka ndị mba ọzọ ịlekọta Amazon, Pantanal, Cerrado, Atlantic Forest wdg.
Nsogbu a bụ na taa enwerelarị satịịtị na iberibe ihe karịrị puku 7,5 puku, ntụgharị oghere. Na nsogbu bụ na iberibe satịlaịtị na-anaghị arụ ọrụ, ma ọ bụ mpempe nke North Korea, Russian, ma ọ bụ ọbụna rọketi ndị America, nwere ike mechaa kpachaa satịlaịtị na-arụ ọrụ ma mee ka ọ kwụsị ọrụ. Ọ ga na-aga n'ihu ruo mgbe ike ndọda na-akụ ya ma ọ banye ụwa ikuku.
Nke a pụtara na anyị nwere 7,5 puku tọn scrap (na mpụga meteorites na-abanyeghị na akaụntụ a) nke nwere ike ịdakwasị isi anyị n'ụzọ nkịtị.
Gịnịkwa ka ihe a metụtara Amazon?
Ihe nke a metụtara Amazon, ma ọ bụ ebe ọ bụla ọzọ n'ụwa, bụ na mpempe oghere dị ka ọ na-abanye na mbara ikuku ụwa ga-amụnye ma ghọọ ebe a na-ere ọkụ. Ọ bụrụ na nha na akụrụngwa buru ibu na-agaghị agbagha na ntinye a, ọ nwere ike ibute ọkụ. Nke ahu puru ibu echiche ozo banyere ihe oku di iche-iche na ndi ozo di ndu, tinyere ndu ndi ozo.
Ọ bụrụ na m nwere ike, ọ bụrụ n’edepụ a metụtara Onye isi ala Jair Bolsonaro, aga m enye echiche nke nwere ike idozi esemokwu ahụ.
Kama ịjụ enyemaka ndị mba ọzọ na iti aka n'obi na-ekwu na Amazon bụ nke anyị na ọ dịghị onye ọzọ. Aga m atụ aro ịnabata enyemaka ma jiri ohere ahụ wee nye iwu onyonyo satịlaịtị ndị na-adịbeghị anya site na mba ndị a. German, Norway, Russia, China, na United States nwere foto ndị a na ebe ha. Ọ ga-ejikwa ohere gbaa izu na obodo ahụ nke ga - enyere aka ịchọta nnukwu ọkụ. Nkwekọrịta ahụ gụnyekwara iji ntọala mmalite Alcântara na Maranhão. Yabụ na anyị nwere ike ịmalite n'ihe gbasara oghere, anyị nwere ike ịnwe teknụzụ teknụzụ, naanị mgbe ahụ anyị nwere ike pịa n'obi wee kwuo, "Ihe data a bụzi eziokwu. Ndị otu ọkụ na ndị agha abanyelarị maka ọkụ ọkụ XYZ."
Onye isi ala Jair Eji m obi umeala na-arịọ gị ime karịa Ridzọ na mgbochi mgbochi. Brazil daalụ. (Onweghi pun nke aha Minister nke Sayensi na Teknụzụ Marcos Pontes onye ga - enyere anyị aka nke ukwuu na isiokwu a.
Ọ ga - esonye n'etiti ndị ọrụ na mba dị iche iche. Ma eleghị anya, anyị ga-agbanyụ ọkụ tupu ha ekwupụta ụdị dị ndụ anyị.
Oh na n'ikpeazụ websaịtị nke esiri ewepu onyonyo: Ana m akwado ịbanye ma hụ etu ọ si dị mma.
Ọ na-ewute m mgbe anyị nwere naanị otu satịlaịtị gburugburu ụwa.
Ọ bụghị ndị enyi m ?!